Abaal-marin lagu bixinayo akhbaar lagu soo qaban karo Eugenio Darío Molina-López
Eugenio Darío Molina-López
Faalladani waxay tarjameysaa aragtida Dowladda Mareykanka
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka waxay ku yabooheysaa abaalmarin lacagaeed oo gaareysa 10 milyan oo dollar oo la sii doono cidii keenta, xog horseedi karta in lasoo xiro ama dacwad lagu soo oogo Eugenio Darío Molina-López, oo ah nin ka ganacsada daroogada ka timaadda waddanka Guatemala.
Molina waa hogaamiyaha Urur Dambiilayaal Caalami ah oo ku magac dheer Los Huistas. Los Huistas ayay xaruntiisu tahay gobolka Waqooyi-galbeed ee Huehuetenango ee dhaca xadka Guatemala iyo Mexico. Hogaaminta Los Huistas ee Molina ayaa ah mid ay si wanaagsan ula socdaan Dowladaha Mareykanka iyo Guatemalan, labaduba waxay hadda ka shaqeynayaan sidii ay caddaaladda u horkeeni lahaayeen.
Mareykanka ayaa adeegsada hab si wanaagsan loo soo agaasimay si uu ula dagaallamo Urur Danbiyeedyada abaabulan ee heerka caalami ee ka howlgala Bartamaha America.
Abaalmarinta la saaray madaxa Molina ayaa dhameystireysa eedeymaha Waaxda Caddaaladda ee ka dhanka ah isaga iyo kuwa kale ee la howlgala, waxaa sidoo kale taasi barbar socda tallaabada uu qaaday xafiiska xakameynta iyo xayiraadda hantida shisheeye ee Waaxda Maaliyadda, si cuna-qabateyn loogu soo rogo Molina iyo shakhsiyaad kale iyo ururro xiriir la leh Los Huistas, iyadoo la adeegsanayo wareegtada tirsigeedu tahay 14059.
“Kooxaha Danbiilayaasha sida Los Huistas [ururada ka ganacsada daroogada], waxay ka qeyb qaataan xasillooni darrada Guatemala iyo tan gobolka,” sidaasi waxaa yiri Ku xigeenka Xoghayaha Maaliyadda qeybta Argagixisada iyo Sirdoonka Maaliyadda Brian Nelson.
“Los Huistas [ururka ka ganacsada daroogada] waxay si suuq-madow ah kusoo geliyaan maandooriyaasha dilaaga ah, oo ay ku jiraan kokaa’iinta, methamphetamine, iyo herowiinta iyaga oo ka keena Guatemala sii marsiiya Mexico kaddibna ku qeybiya magaalooyin badan oo Mareykanka ah.
Wasaaradda Maaliyadda iyo dowladdeenna Mareykanka oo kaashaneysa tan Guatemalan waxay sii wadi doonaan in ay adeegsadaan, wax walba oo aan heli karno, si aan u kala dhan-taalno shabakadaan danbiilayaasha ah.
In ka badan 75 koox oo danbiilayaal caalami ah iyo kuwo badan oo tahriibiya maandooriyaasha ayaa la horkeenay caddaaladda, iyadoo la kaashanayo Barnaamijka Abaalmarinta Maandooriyaha tan iyo marki la sameeyay sannadki 1986-ki. Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa bixiyay in ka badan $135 milyan oo dollar oo abaalmarin ah tan iyo markaas.
Talo iyo tusaale walba oo la xiriira halka u uku suganyahay Molina waxaa lagu soo hagaajin karaa DHS iyo Baarayaasha Danbiyada Waaxda Amniga, iyadoo loo soo marinayo aaladaha WhatsApp, Telegram, ama Signal nambarka +1-619-350-2012 ama email-ka molina.tips@ice.dhs.gov.
Barnaamijka Abaalmarinta Maandooriyaha iyo Barnaamihka Abaalmarinta Danbiyada Abaabulan ee Caalamiga ah ayaa awood u siiya Dowladda Mareykanka in ay la dagaallanto Danbiyada isaga gudba qaramada iyo in lasoo qabto oo caddaaladda la hor keeno kuwa waaweyn ee baxsadka ah ee ka howlgala meelaha ka baxsan Mareykanka.